Myanmar Finally to EstablishaPension Fund | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Finally to EstablishaPension Fund
The government of Myanmar will establishapension fund instead of using the state budget, according to Dr. War War Maung, Director General of Pension Department. Although most countries have established the pension fund, also known asasuperannuation fund, Myanmar does not have suchascheme for pensioners.
“Pension budget is over one percent of the country’s GDP and equals to the one-sixth of tax revenue of the country. We can say it isalot. Therefore, we need to establishapension fund,” she said at the press conference held on June 24 by the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, Ministry of Commerce, and Ministry of Planning, Finance, and Industry.
The Ministry of Planning, Finance and Industry is now drafting Central Pension Fund Law aiming for the sustainability of the pension system and financial resilience. It has developed pension strategy, plan and budget and will submit to the cabinet and, then, to the parliament.
Government employees with over 10 service years will getapension under the old system and those under 10 years will be subject to the pension fund law.
In January 2019, the government increased pension payment for the government employees, who retired before April 1, 2018, to the same amount that will be paid to the serving employees when they retire.
There are around 700,000 pensioners in Myanmar with 52 million population.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပင်စင်ရန်ပုံငွေ ထူထောင်ထားခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မှ သုံးစွဲသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်ရာ ယခုအခါတွင် ပင်စင်ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်က ပြောသည်။
ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထိုကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ပင်စင်အသုံးစရိတ်ဟာ နိုင်ငံ GDP ရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခန့်ရှိတဲ့အပြင် အခွန်ရငွေရဲ့ ခြောက်ပုံတစ်ပုံ ရှိတဲ့အတွက် သုံးစွဲမှုများပြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်သီးသန့်ရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်ဆောက်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်” ဟု ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်က ပြောသည်။
ရေရှည်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပင်စင်စနစ် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအရ ခံနိုင်ရည်ရှိရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေကို ပြဌာန်းရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဗျူဟာ၊ လုပ်ငန်းစဥ်နှင့်ဘတ်ဂျက်ကို မူကြမ်းအဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရဖွဲ့သို့ တင်ပြထားကာ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မူပုံစံအရ ဝမ်းထမ်းများလုပ်သက် ၁၀ နှစ်အထက်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မူလပင်စင်စနစ်အတိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကာ ၁၀ နှစ်အောက်ဝန်ထမ်းများကတော့ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီက ပင်စင်လစာခံစားနေသူများကို လက်ရှိထမ်းဆောင် နေသောဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူပါက ရရှိမည့်ပင်စင်ခံစားခွင့်အတိုင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစပြီး တိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Previous articleReal Estate Market Hopefully to Recover Soon
Next articleSingapore’s Ascent Invests $26 Million in Frontiir